देउवाकाे बाेलीले कांग्रेसलाई क्षति,देउवाका विवादित बाेली श्रृङखला – Hamrosandesh.com
देउवाकाे बाेलीले कांग्रेसलाई क्षति,देउवाका विवादित बाेली श्रृङखला
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा पछिल्लो समय केही विवादीत सम्बोधनका कारण चर्चाको शिखरमा छन् । सिंगो देशको नै चर्चामा रहेका घटनाको बारेमा देउवाले गरेको सम्बोधनले उनी आलोचित पनि बन्दै गइरहेका छन् । उपनिर्वाचनको संघारमा रहेका राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम जोडेर शनिबार सभापति देउवाले गरेको सम्बोधनको चर्चा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म व्यापक भएको छ । त्यसोत, यसअघि पनि देउवाको सम्बोधनले उनीमात्रै नभई सिंगो पार्टीले नै आलोचना खेप्न परेको थियो । देउवाले बोलेका यस्ता सम्बोधनले कांग्रेसको सिंगो राजनीति तथा पार्टी कार्यकर्तालाई धेरै असहज हुने गरेको नेताहरु बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापति जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले आवेगमा भन्दा पनि सर सल्लाहमा सम्बोधन गर्नपर्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
केही समयअघि सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो । देउवाले विप्लव समूहप्रति सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको स्वागत गरे । विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै विराटनगर पुगेका देउवा विप्लवप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत पनि भए । उनले भनेका थिए–‘विप्लवको कामप्रति सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको कांग्रेस स्वागत गर्छ, हाम्रै साथीहरुमाथि पनि उनको त्रास थियो । प्रतिबन्ध मात्र होइन उसलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ ।’ विप्लव समूहलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर बोलिसकेका देउवाको बोली लामो समय टिक्न सकेन् । भावनात्मक हिसाबले बोलेका देउवाले विप्लवको पार्टीको प्रतिबन्धका विषयमा क्रमश ः सरकारको आलोचना बढ्दै गएपछि आफ्नो बोली पनि फेरे । उनले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए । घटना २
केही महिनाअघि सरकारले डा. सीके राउतसंग गरेको सम्झौता गर्यो । उक्त सम्झौताको स्वागत देउवाले खुलेरै गरे । तर, केही समयपछि देउवाले बोली फेर्दै यो सम्झौता राष्ट्रघाति भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिए । सम्झौताको केहीबेरमै स्वागत गरेका देउवाले त्यसको ती चार दिनपछि आफ्नो बारेमा आफैं प्रष्ट नभएको जस्तो सम्बोधन गरे । ‘राष्ट्रघाति सम्झौता’ भएको टिप्पणी गर्न भ्याएका सभापति देउवाले चारदिनपछि आफूले उक्त दस्तावेज नै नपढेको स्वीकार गरे । उनले भने–‘सीके राउतसंग भएको सम्झौतालाई हामीले राष्ट्रघाति सम्झौताका रुपमा लिएका छौं । तर, मैले पढ्न पाएको छैन्, पढ्छु । देश टुक्र्याउने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन् ।’
बम विस्फोट एंव ईंटाभट्टामा जिउँदै मानिस पोलेको आरोपमा पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफताब आलमको बचाऊमा देउवाले बोले । उनले अफताबको पक्राउलाई कांग्रेसविरुद्धको षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । १२ वर्षअघि भएको घटनालाई कोट्याएर सरकारले कांग्रेसलाई प्रहार गर्न थालेको उनको टिप्पणी थियो । उक्त सम्बोधनबारे सोसल मिडियामा चर्को आलोचना खेपेपछि उनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आलममाथिको अनुसन्धानलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने बताए । विवादमा तानिएपछि उनले ‘अस्पष्टता र अन्यौल निवारणार्थ’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनले पूर्वाग्रह र दबावबाट मुक्त रहेर आलममाथिको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँदै स्पष्टिकरण दिए–‘कुनै पनि गम्भीर मुद्दामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुँदा त्यसले निर्दोष सावित हुने या दोषी ठहर हुने सत्यतथ्य अन्वेषण गर्ने कार्यमा बाधा पुग्छ नै । १२ वर्ष पूरानो मुद्दामा मैले यही संकेत गरेको हुँ ।’
देउवाको पछिल्लो विवादीत सम्बोधन ताजै छ । कास्की क्षेत्र नम्बर २ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पोखरा पुगेका देउवाको सम्बोधनको विरोध अहिलेपनि भइरहेको छ । सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग सल्लाह गरेर नै भारतले सीमा मिचेको आरोप लगाए । उनले भनेका छन्–‘ओलीसंग भित्रीरुपमा सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेको हो, यो त्यस्सै छाप्छ ? ओलीको सहमतिबिना छाप्नै सक्दैन ।’ यसबारे देउवाले बोली फिर्ता गरिसकेका भने छैनन् । नेकपाका केन्द्रीय तहका नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म देउवाले बोली फिर्ता लिँदै माफी माग्नसमेत सुझाव दिएका छन् । हटपाटी संवाददाता बाट